Programs and Courses - Japan Electronics College
ဒီဘာသာရပ်မှာ သင်ယူမယ်ဆိုရင် လုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ လောက (ဘာသာရပ်) ကို
တီထွင် ဖန်တီးနိုင်လာတဲ့ CG Designer တယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီကျောင်းကို စ၀င်ချိန်မှာ လုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆင်းကျောင်းသား အယောက် 4600 ၀န်းကျင်လောက်က CG Designer ဆိုပြီးတော့ အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်တွေ (ဥပမာ Movie, Television Commerical, Animation, Game) မှာ အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။
ဒီ Computer Graphic ဘာသာရပ်က ဂျပန်မှာ ပထမဆုံးသော CG ရဲ့ ပညာရေးကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျောင်းက ဒီဘာသာရပ်ရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းက ဒီ CG လောကမှာ မြင့်မားနတဲ့ Result တွေဖော်ပြခြင်းခံရပါတယ်။
CG Designer, CG Animator, CG Game Designer, Character Model အစရှိသဖြင့်
1. ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေက ကျော်ကြားတဲ့ product တွေ Movie တွေ ထုတ်လုပ်မှုမှာပါဝင်နေခြင်း
Eg. FINAL FANTASY, PURICURE, HARRY POTTER, MORSTER HUNTERY, MARIO TENNIS
2. ပထမနှစ်မှာ CG ရဲ့ အခြေခံကိုသင်ယူရပါမယ်။ ဒုတိယနှစ်မှာ CGရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးဝင်မယ့် နည်းပညာပိုင်းတွေကို သင်ယူနိုင်ခြင်း
ဥပမာ CG Animator, Modeler, Effects Artist
3. ကျောင်းစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ 90% ကျော်ကျောင်းသားတွေက အတွေ့အကြုံ လုံးဝမရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကျောင်းဆင်းပြီးနောက်မှာတော့ 90% ကျော် ကျောင်းသားတွေက CG Designer ဆိုပြီး အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။
Computer Graphic & Visual Arts
CG နဲ့ ရုပ်ရှင် game တွေထဲက CG ဇာတ်ကောင် တွေကို တီထွင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ VFX creator တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဘာသာရပ်မှာတော့ အမျိုးမျိုးသော နယ်ပယ် (Movie, Television, Comerical, Promotion video) တွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ VFX (visual effects) ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင်ယူရပါမယ်။ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ဇတ်ကောင်တွေထဲက 3D CG နဲ့ Photographing နည်းပညာတွေနဲ့ အသုံးပြုလာပြီး VFX software နည်းပညာက ပိုပြီးအောင်မြင် အသုံးပြုလာမဲ့ နည်းပညာပါ။ ဒီဘာသာရပ်က 3DCG ရဲ့ ရေးဆွဲဖန်တီးခြင်းတွေနဲံ Photographing ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အဆင့်ဆင့် သင်ယူရပါမယ်။
VFX Creator, CG Designer, Compositor, CG Creator
1. ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေက အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ Product ရဲ့ VFX Creator တွေဖြစ်နေပါတယ်။
Product example, STAD BY ME DORAEMON, PARASYTE
2. CG, Image Production တွေရဲ့ နယ်ပယ်မှာ အလုပ်ရမှု 90%
3. Group ဖွဲ့ပြီးလေ့ကျင့်မှုများကို လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်နိုင်မှု
ရုပ်ရှင်ဇာတကောင်တွေရဲ့ Project တွေမှာ VFX Creator တွေ CG Designer တွေက အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွေကို လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ဒီကျောင်းရဲ့ သင်ခန်းစာသင်ယူမှုမှာလဲ အဲ့လိုမျိုး အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး Project တွေကို လုပ်ရတဲ့ သင်ယူမှုတွေကိုလဲ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
မြင့်မားတဲ့ level ရဲ့ Computer Graphic ကို တီထွင်နိုင်တဲ့ CG Creator ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကြီးမားလှတဲ့ Dragon ကောင်ကြီးတွေက ဖျက်ဆီးတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ မြို့တွေ Magic တွေနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ Hero တွေ မြင့်မားတဲ့ အဆုံးသတ်မှုတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်တွေကို ဖျက်ဆီးခြင်း ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခြင်း အစရှိတာတွေကို တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေလို လုပ်ထားတဲ့ CG Effect….. မြင့်မားတဲ့ CG နည်းပညာသင်ယူမှု၊ ကျောင်းပြီးဆုံးချိန်မှာ Programing နည်းပလာနဲ့ CG Project တွေကို လုပ်နိုင်တဲံ Technical CG, Creator ဖြစ်လာနိုင်နတယ်။
Technical CG Creator, CG Supervisor, Technical CG, CG Programmer, CG Creator, Motion Capture Engineer
1. Technical CG Creator ဖြစ်လာနိုင်ခြင်း
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရဲ့ CG, VFX လောကမှာ CG Creator ကမလုံလောက်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Technical CG Creator ရဲ့နည်းပညာတွေ သင်ယူနိုင်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေရှိတဲ့ ကျောင်းအနည်းစုထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ဘာသာရပ်ပါ။
2. အလုပ်ရှာရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ နည်းပညာပိုင်းကို သင်ယူနိုင်ခြင်း
CG Tool: Houndini, Nukex　Programming Language: MEL, Python
3. ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေက Technical CG Creator ဆိုပြီးတော့ အလုပ်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေခြင်း
မြင့်မားတဲ့ နည်းပညာစွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေက နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
အလုပ်ဥပမာ- Maleficent, Transcendence, Tangled, The Amazing Spider-Man
ကမ္ဘာအ၀ှမ်းမှာ အလုံးအရင်းနဲ့ ဖြစ်တည်မွေးဖွားလာတဲ့ Game Creator ဖြစ်လာနိုင်မယ်။
Game တီထွင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အသိပညာနဲ့နည်းပညာတွေကို (eg; Programming, Design, Game Sound, Planing) အစရှိတာတွေကို သင်ယူရပါမယ်။ Game Company တွေလိုမျိုး လူများများနဲ့ Team ဖွဲ့ပြီး Game ကိုတီထွင်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေကို လုပ်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီလို လေ့ကျင့်မှုတွေကနေ တီထွင်ထားတဲ့ Game တွေရဲ့ အရည်အသွေး မြင့်မားမှုဟာ (Japan Game Awards) မှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး အနိုင်ရမှုတွေ Game Company တွေကနေ၀ယ်ယူချင်တယ်ဆိုတဲ့ order တွေပါရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ Game Company မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Game Creator (Developer) တွေက လက်တွေ့လာရောက်သင်ကြား ပေးတဲ့ သင်ကြားချိန်များလဲရှိပါတယ်။
Game Programmer, Game CG Designer, Game Panner, Game Director, Game Producer
1. Game Developer တွေရဲ့ သင်ကြားမှုကို ရယူနိုင်ခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး Game Developer တယောက်ဖြစ်တဲံ Keiji Inafune ရဲ့ သင်ကြားမှုကို လက်တွေ နာခံနိုင်ပါမယ်။
Keiji Inafune ရဲ့ တီထွင်ထားတဲ့ Product တွေကတော့ MegaMan, Resident Evil, Monster Hunter….,
2. ကျောင်းသားတွေရဲ့ Product တွေက ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုတွေရနေခြင်း
Japan Game Awards (GFF Award), (Asia Digital Award) ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး ဆုတံဆိပ်တွေရရှိနေပါတယ်။ (Tokyo Game Show) မှာလဲ နှစ်တိုင်း Product ကို ၀င်ရောက်ပြသနေပါတယ်။
3. နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ Game Company တွေမှာ အလုပ်ရနိုင်ခြင်း
ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေက နာမည်ကြီးတဲ့ Game Company တွေမှာ Game Programmer, Designer, Game Planner ဆိုပြီး အလုပ်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
Company example; SQUARE ENIX, SEGA, KONAMI, CAPCOM
Team Work နဲ့ မြင့်မားတဲ့ နည်းပညာတွေကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Programmer ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Game Programming ဘာသာရပ်က Programming က အဓိက လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်က 21နှစ် မတ်ိုင်ခင်က ဂျပန်မှာ ပထမဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ Game Programming ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်ပါ။ Game ဖန်တီးခြင်းကို လုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ လူလဲ ဒီကျောင်းမှာ ၂နှစ်ကြာသင်ယူပြီး Game Programming ရဲ့နည်းပညာနဲ့ အသိပညာတွေကို တတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာမှာတော့ မှုရင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာအုပ် 12အုပ်ကို အသုံးပြုပြီး သင်ယူလေ့လာ ရပါမယ်။
Game Prgrammer, Game Director, Game Producer,
1. ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေက ကျော်ကြားတဲ့ Game တွေကို တီထွင်နိုင်ခြင်း၊ နာမည်ကြီး Company တွေမှာ အလုပ်ဝင်ရောက်နေပါတယ်။
Company example; Nintendo, SEGA, KONAMI, CAPCOM, BANDAI, NAMCO Entertainment
Game example; Super Smash, Bros, Mario Party Series, Dragon’s Dagma, Dark Arisen, Sacrifice
2. သင်ခန်းစာတွေမှာ ၁နှစ်အတွင်း Product 10မျိုးကျော်တဲ့ Game တွေကို တီထွင်ခြင်း
3. အသိအမှတ်ပြု Certificate ရရှိမှု
80% အထက် ကျောင်းသားတွေက အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေ Certificate စာမေးပွဲတွေ အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုလက်မှတ်ရထားရင် အလုပ်ရဖို့ အားသာပါတယ်။
Certificate example; ITPassport Examination, IT Certificate Series….,
ဖန်တီးမှုအသစ်တွေနဲ့ Game တွေကို တွေးတောနိုင်ပေမဲ့ အဲ့ဒါကို တကယ့်လက်တွေ
ဂိမ်းဖြစ်လာနိုင်ဖို့က Planning ရဲ့ အင်အား၊ Programming, Design စတဲ့ အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာက လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်မှာ အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်မယ့် Game Planner တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့သင်ယူရပါမယ်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာ အဓိကကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ ဟောပြောမှုကို နားထောင်ခြင်း၊ Product တွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ချက်တွေကို ရယူနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို အများအပြားပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရောင်းရတဲ့ ဂိမ်းတွေ၊ လူကြိုက်များတဲ့ ဂိမ်းတွေကို တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Game Planner တယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
Game Planner, Game Director, Game Producer
1. Game ရဲ့အစကနေ နောက်ဆုံး Game Planner အထိ ဖြစ်လာစေနိုင်ခြင်း
Game Planner တယောက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာတွေဖြစ်တဲ့ Marketing, Scenario, Project, Proposal ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးခြင်း၊ Design, Programming အစရှိတာတွေကို သင်ယူရပါမယ်။
2. အတွေးခေါ် Idea တွေကို ချက်ခြင်း ဂိမ်း အနေနဲ့ဖန်တီးနိုင်ခြင်း
ဂိမ်းမတီထွင်ဖူးတဲံလူကိုလဲ ၃ပတ်အတွင်းမှာ အရှိန်အဟုန်တခုနဲ့ ဂိမ်းကို တီထွင်လာနိုင်မဲ့ သင်ခန်းစာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီလို ဂိမ်းကို တီထွင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကို တကယ့်ဂိမ်း အနေနဲ့ တီထွင်နိုင်စေပါမယ်။
3. အလုပ်ဝင်ရောက်တဲ့ Company example; CAPCOM, Vanguard
ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေက Game Company တွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Game Planner တွေက အများကြီးရှိခြင်း
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ အားလုံးက စိတ်အားထက်သန်စွာနဲံ character တွေလိုရေးဆွဲတဲ့ Animator တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Animation ရဲ့အင်အားတခုကတော့ လက်နဲ့ရေးဆွဲတဲ့ ပုံဆွဲပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်မှာ လက်နဲ့ရေးဆွဲခြင်း၊ ပုံဖော်ဖန်တီးခြင်း ပညာရပ်တွေ၊ Drawing ပိုင်းတွေကို သင်ယူရပါမယ်။ Motion ရုပ်ပုံလွှာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကို အခြေခံကနေ အဆင့်မြင့်ထိ သင်ယူရပါမယ်။ အနာဂတ်မှာ Animator တယောက်အနေနဲ့ အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် ပညာရေးကို ဦးစားပေးသင်ကြားပေးပါတယ်။
Animator, Character Designer, Animation Designer
1. ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေက Animation Product အများအပြားပါဝင်ဖန်တီးနေခြင်း
Animation product example; Evangelion, Mobile Suit Gundam, NARUTO, Attack on Titan, Kill La Kill, Fat Night
2. Animator တွေရဲ့ လက်တွေ့သင်ကြားမှုကို သင်ယူနိုင်ခြင်း
လက်ရှိ Animator ဆိုပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ Animator အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆရာတွေက သင်ကြား ပေးပါမယ်။ အထူးသင်ကြားမှုအပိုင်းဖြစ်တဲ့ Animation Director ရဲ့ Lecture ကိုလဲထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
3. နာမည်ကြီး Animation Company တွေမှာ ကျောင်းသားအများစုက အလုပ်ဝင်ရောက်နေခြင်း
ဒီကျောင်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Animation Company 87% က အာရုံစူးစိုက်ခြင်းခံတယ်။ Nerima City, Suginami City တွေမှာ အလုပ်ရလွယ်ကူပါတယ်။
Animation Compan တွေရဲ့ Internship တွေ Animator တယောက်ဆိုပြီး အလုပ်ရှာချိန်မှာ အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ ကိုယ်တိုင်ဖန်းတီးထား တဲ့ Product တွေကို ကျောင်းတက်နေစဉ်မှာကတည်းက တီထွင်ဖန်တီးခြင်းတွေကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Animal လောကမှာတော့ Computer ကို သုံးထားတဲ့ Special Effects, CG ကနေဖန်တီးထားတဲ့ Robot ရဲ့လှုပ်ရှားမှု အစရှိတဲ့ သစ်လွင်ဆန်းပြားတဲ့ နည်းပညာတွေက တဆင့်တဆင့် ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်မှာတော့ Drawing ပိုင်းကနေ နောက်ဆုံးအဆင့် ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှုအထိ Animation တီထွင်ခြင်းရဲ့ အပိုင်းအားလုံးကို သင်ယူနိုင်ပါမယ်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာစွမ်းအားနဲ့ Communication ပိုင်းကို ပေါင်းစပ်ပြီး Animal ရဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ တယောက်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်တဲ့ လူတယောက် ဖြစ်လာစေပါမယ်။
Animator, Character Designer, Animation Director
1. Animal ရဲ့အပိုင်းအားလုံးကို သင်ယူနိုင်ခြင်း
[Animation] [Coloring] [photography] [Backgrounds] [production Advance] [Diron] အစရှိတဲ့ Animal နဲ့ပတ်သတ်တာတွေကို အားလုံးသင်ယူရပါမယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် အပိုင်းကို ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ပြီး သင်ယူနိုင်ပါမယ်။
2. လက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ Product ပြုလုပ်ခြင်း လက်တွေ့သင်ကြားခြင်း
တကယ့်အပြင်မှာ လုပ်ကိုင်ရတဲ့ Animation Product တီထွင်ခြင်းလိုမျိုး Team ဖွဲ့ပြီးကိုယ့်အပိုင်းအလိုက် တာဝန်ခွဲဝေပြီးပြုလုပ်ရတဲ့ သင်ကြားခြင်းအပိုင်းလဲရှိပါတယ်။
3. နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ Animation Company တွေမှာ ကျောင်းသားအများစုက အလုပ်ဝင်ရောက်နေခြင်း
ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားအများစုက Animation လောကမှာ အလုပ်ဝင်ရောက်နေပါတယ်။ Animation Company တွေ Intership တွေ Animator တယောက်ဆိုပြီး အလုပ်ရှာချိန်မှာ အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ Product တွေကို ကျောင်းတက်နေစဉ်မှာ တီထွင်ခြင်း Animation Company တွေကို သွားရောက် ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း အစရှိတာတွေကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
အလုပ်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ Company example; OIM, T2 Studio, MADHOUSE
Design နဲ့ Program ကို အသုံးပြုပြီး Web Designer တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Web Design အတွက် လိုအပ်တဲ့ Planning, Planning Presentation, Design, Websit Creation အစရှိတာတွေကို သင်ယူရမယ့် ဘာသာရပ်ပါ။ သင်ခန်းစာတွေမှာတော့ Prefecssional Web Designer တယောက်လိုမျိုး နည်းပညာတူညီစွာ သင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် မြင့်မားတဲ့ နည်းပညာကို လေ့လာနိုင်ပါမယ်။ လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်မယ့် စီးပွားရေး website တွေကို ဖန်တီးတဲ့ သင်ခန်းစာပိုင်းလဲရှိပါတယ်။ ဂျပန်ရဲ့ Nation Skills Cometition ရဲ့ အခုအချိန်အထိ ဆုတံဆိပ်35ခုကို ရယူထားပါတယ်။
Web Designer, Web Programmer, HTML Coder, Web Director
1. Company တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ သင်ခန်းစာပိုင်းကို လက်တွေ့သင်ယူနိုင်ခြင်း
NIPPON TRAVEL AGENCY, Meiji Holdings, ITOHAM အစရှိတဲ့ company တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ ဧည့်သည်လို သဘောထားပြီး Web Design တွေကို ဖန်တီးပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ Company တွေ Web Designer တွေ ရဲ့လက်တွေ့ သင်ကြားပေးတဲ့ အချိန်တွေလဲ ရှိပါတယ်။
2. Web အပိုင်းရဲ့ နာမည်ကြီး Company တွေမှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း
အလုပ်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ Company example; GREE, DENA, Cyber Agent, Yahoo, Rakuten
3. ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ World Skills Competition မှာ ၃ကြိမ်ဆက်တိုက်ပါဝင်ခြင်း (England, Germany, Brazil)
နိုင်ငံတကာရဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ကျောင်းသာတွေက ဒီ World Skills Competiton ပြပွဲပြိုင်ပွဲတွေမှာ Web Designer နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ၃ရက်ကြာပါဝင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ နံပါတ် ၈ ကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးမျိုးသော အပိုင်းတွေမှာ Designer တယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်က ကျယ့်ပြန့်လှတဲ့ အပိုင်းတွေ (Advertising, Magazine, Poster, CD Jacket, Game, Web Mobile App, Ebook) အစရှိတာတွေရဲ့ Design တွေကို သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
Planning Presentation တွေကို ပြုလုပ်ပေးတာတွေက တကယ့်လက်တွေ့ Company တွေမှာ အလုပ်လုပ်ရသလိုမျိုး အဆင့်တွေနဲ့ Design ပညာရပ်ကို သင်ယူနိုင်ပါမယ်။ ကျောင်းစတင်ဝင်ရောက်ချိန်မှာ Design ရဲ့ စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်း အခြေခံကနေ သင်ယူရမှာဖြစ်လို့ အတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိတဲ့လူတွေလဲ စိတ်ဝင်စားစွာ သင်ယူနိုင်ပါမယ်။
Graphic Designer, Illustrator, Editorial Designer, Art Designer
1. အမျိုးမျိုးသော Design တွေကို သင်ယူနိုင်မယ့် အပြင် အလုပ်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ပါ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း
ဒီကျောင်းမှာ Web Design နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သင်ယူနိုင်ခြင်းပဲ မဟုတ်ဘဲ Ebookaw တွေ Digital Signage တွေရဲ့ Design ပိုင်းကိုလဲ သင်ယူနိုင်ပါမယ်။ ကျယ်ပြန့်တဲ့ Design တွေကိုပါ သင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဲ့ဒါတွေထဲက ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ်ထင်တဲ့ အပိုင်းကို ရွေးချယ်လာနိုင်ပါတယ်။
2. ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေက အမျိုးမျိုးသော Company တွေမှာ Designer ဆိုပြီးဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေခြင်း
အလုပ်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ Company example; Advertising Industry, Game Industry, Mobile App Industry, etc…,
3. အတွေ့အကြုံ လုံးဝမရှိတဲ့လူကနေ Designer တယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်ခြင်း
ကျောင်းဝင်ရောက်ပြီးချိန်မှစပြီး အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူတွေအတွက် Startup Workshop ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာပိုင်းကိုလဲ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ၂နှစ်ပြီးမြောက်ချိန်မှာ ကျောင်းသားအားလုံးက Designer ဆိုပြီး နည်းပညာပိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လူတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
“မိမိကွိုကျနှဈသကျသောအဝတျကို လိုကျဖကျအောငျဝတျခွငျး”၊ “တဈခြိနျတညျးစကားပွနျခွငျး”၊ “ကားမောငျးခွငျး” စသညျဖွငျ့ စဥျးစား၍ လုပျဆောငျရသောအရာတို့ကို AI (လူတို့ဉာဏျရညျကို ကှနျပြူတာဖွငျ့ စီစဉျတုပမှု) ဖွငျ့ အစားထိုးလုပျဆောငျလာနိုငျခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ ကှနျပြူတာဖွငျ့ အငျတာနကျကိုခြိတျဆကျကာ အမြိုးမြိုးသောဝနျဆောငျမှုကို ရရှိနိုငျသညျ့ လူ့ဘောငျအဖှဲ့အစညျးအတှကျ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား၏ လုပျငနျးဆောငျတာမြားနှငျ့ ထုတျလုပျရေးလုပျငနျးသုံး စကျရုပျမြား အဆငျ့မွငျ့တိုးတကျမှု၊ IoT (Internet of Things) စကျမြား၏ Big data အား စုဆောငျးမှုသညျလညျး AI ၏ပြံ့နှံ့မှုကို လှုံ့ဆျောလကျြရှိပါသညျ။ ဤဌာနသညျ ယခုအခြိနျအထိ စနဈ အားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစသေညျ့ နညျးပညာအပွငျ “AI”၊ “Big data”၊ ”IoT” ဟူသညျ့ နညျးပညာ ၃ ခုကို ခွုံငုံလကျြ တတျမွောကျထားသညျ့ နောငျမြိုးဆကျသဈ IT အငျဂငျြနီယာမြားကို ပွုစုပြိုးထောငျပေးမညျ ဖွဈပါသညျ။
AI အငျဂငျြနီယာ၊ System အငျဂငျြနီယာ၊ Data Scientist၊ ပရိုဂရမျမာ
1. ခတျေရှပွေ့ေးနသေော AI စနဈ ၏ တညျဆောကျမှုတှငျ လိုအပျသောဗဟုသုတ၊ နညျးပညာမြားကို တဈပေါငျးတဈစညျးတညျး လလေ့ာနိုငျခွငျး
Deep learning၊ စကျပိုငျးဆိုငျရာလလေ့ာခွငျး၊ IoT Sensor တို့ဖွငျ့ Data စုဆောငျးခွငျး၊ Big data ခှဲခွမျးစိတျဖွာခွငျး စသညျ့ AI စနဈ တှငျ မရှိမဖွဈလိုအပျသော ခတျေမီနညျးပညာမြားကို လလေ့ာနိုငျပါသညျ။
2. AI အငျဂငျြနီယာမြား၏ လူ့အဖှဲ့အစညျးဆိုငျရာ လိုအပျခကျြမှာ နှဈစဥျမွငျ့တကျလကျြရှိပွီး အနာဂတျတှငျ အလားအလာအကောငျးဆုံးဖွဈျ
“AI”× “Big data”× “IoT” တို့ကိုပေါငျးစပျထားသော AI စနဈ သညျ တဟုနျထိုးပြံ့နှံ့လကျြရှိပွီး၊ AI ကိုလကျတှအေ့သုံးခနြိုငျမညျ့ အငျဂငျြနီယာမြား၏ လူ့အဖှဲ့အစညျးဆိုငျရာ လိုအပျခကျြမှာ မွငျ့တကျ လကျြရှိပါသညျ။ ဤဌာနတှငျ ၎င်းငျးတို့၏ နညျးပညာလိုအပျခကျြမြားကို စုပေါငျးလလေ့ာနိုငျပွီး၊ နောငျ IT အငျဂငျြနီယာမြိုးဆကျသဈမြားကို ပွုစုပြိုးထောငျပေးသှားမညျဖွဈပါသညျ။
3. ကှနျပြူတာအတှကွေုံ့မရှိသူမြားလညျး စိတျပူရနျမလို
ပရိုဂရမျးမငျး နညျးပညာနှငျ့ပကျသကျ၍ Python နှငျ့ Java တို့၏ AI ပရိုဂရမျးမငျး ကိုအထူးပွုထားသညျ့အပွငျ သငျခနျးစာအားလုံးကို မူရငျး သငျထောကျကူပစ်စညျးမြားဖွငျ့ သငျကွား ပေးမညျဖွဈသောကွောငျ့ ကှနျပြူတာအတှကွေုံ့မရှိသူဖွဈစကောမူ သငျယူရလှယျကူသညျ့ သငျရိုးညှနျးတမျးဖွဈပါသညျ။
Information, Business, License
Business ပိုင်းတွေ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလက်မှတ်တွေနဲ့ Computer ပိုင်းတွေကို သင်ယူပြီး အမျိုးမျိုးသော နယ်ပယ်တွေမှာ အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် နိုင်မယ့်သူတယောက် ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေ၊ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းခြင်း စွမ်းအင်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် Group ဖွဲ့ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ သင်ယူလေ့လာဆည်းပူးရပါမယ်။ နောက်ပြီး Microsoft Japan နဲ့အတူတူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာပိုင်းနဲ့ SNS တွေ Cloud တွေ အစရှိတဲ့ Internet ကို အသုံးပြုပြီး အသစ်အသစ်သော နည်းပညာတွေကို သင်ယူရပါမယ်။
Sales, Sales Coordinator, Accountant, Technical Support
1. အမျိုးမျိုးသော နယ်ပယ်တွေရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ Company တွေမှာ အလုပ်ရနိုင်ခြင်း
Company example; Cycle Base Asahi (Bicycle Shop), Samantha Thavasa Japan (Apparel), Transs(IT)
2. ၂နှစ်အတွင်း အလုပ်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း
လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကို ၀င်ရောက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊ ကွန်ပြူတာ စွမ်းရည် အစရှိတာတွေကို သင်ခန်းစာ တရပ်အနေနဲ့သင်ယူရပါမယ်။
3. MOS (Word, Excel) Certificate ရရှိနိုငမှု 100%
ဒီဘာသာရပ်စတင်ပြီး သင်ကြားပေးတဲ့ ၂နှစ်မတိုင်ခင် အချိန်ကနေ အခုအထိ Microsoft Office Specialist ရဲ့ Certificate ရရှိမှုရ ၁၀၀% ဆက်တိုက်ရရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Secretarial Skill Proficiency Test, The Official Business Skills Test Ineping အစရှိတဲ့ လက်မှတ်တွေကိုလဲ ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ၀င်ရောက်ကြိုးစားဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Idea ကို App တခုအနေနဲ့ ကမ္ဘာမှာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ Mobile Application Developer တယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီဘာသာရပ်က Android, iPhone အစရှိတဲ့ Smart Phone တွေ iPad တွေရဲ့ Tablet Computer ရဲ့Application တီထွင်ခြင်းကို သင်ယူနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်ပါ။ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂိမ်း၊ Animal တွေရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးသူတွေရဲ့ Business Planning နဲ့ Taxaccountant ရဲ့ Business Management ပိုင်းရဲ့ သင်ယူခြင်း အချိန်တွေလဲရှိပါတယ်။ Mobile Application ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးခြင်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး Business Management, Design အစရှိတဲ့ အပိုင်းတွေရဲ့ လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာ အသိပညာပိုင်းတွေကိုပါ သင်ယူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Mobile Application Developer, Mobile Content Creator
1. ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး Mobile Application တီထွင်ခြင်းကို သင်ကြားပေးတဲ့ ဘာသာရပ်ဖြစ်ခြင်း
Softbank ကနေ Softbank Solution Provider ဆိုပြီး အသိအမှတ်ပြုခံရပါမယ်။ Mobile App တီထွင်ဖန်တီးခြင်း နည်းပညာတွေကို သင်ယူနိုင်ပါမယ်။ (Softbank= ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဖုန်း Company အမည်)
2. Company နဲ့ Product တီထွင်ခြင်းကနေ ရောင်းချနိုင်တဲ့ အထိ နည်းပညာတွေကို သင်ယူနိုင်ခြင်း
ကျောင်းသားတွေက အမျိုးမျိုးသော Mobile App တွေကို တီထွင်ပြီး Relase လုပ်ပါတယ်။
3. iPhone, Android App ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးခြင်းကို သင်ယူနိုင်ခြင်း
ပုံမှန် App ရဲ့တီထွင်ခြင်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ HTML5 ကို အသုံးပြုပြီး hybrid mobile app ရဲ့ နည်းပညာပိုင်းကိုပါ သင်ယူရပါမယ်။ ဒီကျောင်းရဲ့ သင်ကြားမှု Lecture တွေမှာ iPhone, iPad, Android ရဲ့ စက်ပစ်စည်းတွေကိုပါ အဆင်သင့်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
၂နှစ်အတွင်းမှာ လုံးဝ ပြီးပြည့်စုံပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ Programmer တယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
IT လောကမှာ အဓိက အများဆုံး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ နည်းပညာရှင်က Programmer ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Programmer တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် သင်ယူမှုအပိုင်းကို အဆင့်၅ဆင့်ရှိတဲ့ Stage up ဆိုတဲ့ သင်ကြားခြင်း အပိုင်းတွေ Course ၆ခုကနေ ရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်ပါ။ လုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူက သင်ယူရာမှာ လွယ်ကူအဆင်ပြေနိုင်ဆုံးဘာသာရပ်ပါ။ အစကနေ စသင်ယူရမယ့်လူကနေ Programmer ကောင်းတယောက် ဖြစ်ချင်ရင် အသင့်တော်ဆုံး ဘာသာရပ်ပါ။
Programmer, System Operator
1. အဆင့် ၅ဆင့် Stage up သင်ကြားခြင်း နည်းပညာနဲ့ ၂နှစ်တာအတွင်း
လုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူကနေ Programmer တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်း
ဒီဘာသာရပ်ကို ၀င်ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသားအများစုက လုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ လူပါ။ ဒီကျောင်းရဲ့ မှုရင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေနဲ့ တဖြည်းဖြည်းသင်ယူနိုင်မယ်။
2. အလုပ်ရှာနိုင်တဲ့ လူအချိုးက အဆ ၄၀ကျော်ရှိခြင်း
ဒီဘာသာရပ်စတင်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကနေအခုအထိ ၄၈နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အခုအထိ ဒီကျောင်းကနေ ဒီဘာသာရပ်ရဲ့ ၂သောင်းကျော်ရှိတဲ့ ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေက IT နယ်ပယ်မှ အလုပ်ဝင်ရောက်နေပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေ ၀င်ရောက်နေတဲ့ နာမည်ကြီး Company Name: Yahoo, NTT, Fujitsu, Hitachi အစရှိတဲ့ Company တွေ… ဒီ Company ကြီးတွေရဲ့ Group Company တွေမှာ အများဆုံး အလုပ်ရကြပါတယ်။
3. အလုပ်ရဖို့အတွက် အထောက်အကူပြု Certificate တွေကိ ရရှိနိုင်ခြင်း
Certificate example; IT Passport Examination, Fundamental Information Technology Enginerr Examination
ဒီဘာသာရပ်မှာတော့ ၂နှစ်ကြာ သင်ယူခြင်းနဲ့ System Engineer တယောက်ဖြစ်လာဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ SE အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာတွေရှိပြီး ကျောင်းသားအများစုက IT နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Certificate စာမေးပွဲကို ဖြေဆို အောင်မြင်နေပါတယ်။ Lecture တွေမှာProgramming နည်းပညာချည်းပဲ မဟုတ်ပဲ System Engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့နည်းပညာတွေကို သင်ယူရပါမယ်။ System Engineer ဆိုတာ Programmer ရဲ့အထက်မှာ ရှိတဲ့ အလုပ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ System Design အပိုင်းကနေ Development အပိုင်းအထိ အဆင့်ဆင့် သင်ယူရပါမယ်။ University ကျောင်းဆင်းတွေ အလုပ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ လူတွေပါ လာရောက်သင်ကြားတဲ့ အထူးဘာသာရပ် တခုပါ။
System Engineer, Programmer
1. ၂နှစ်အတွင်း SE တယောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသော SE အထူးပြုဘာသာရပ်ဖြစ်ခြင်း
ဒီဘာသာရပ်ရဲ့ ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေက SE ဆိုပြီး အလုပ်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ SE အတွေ့အကြုံရင့် ဆရာတွေ၊ လက်ရှိ SE အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူတွေရဲ့ Development ပညာပိုင်းကို သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
2. နာမည်ကြီး IT Company တွေမှာ ကျောင်းဆင်းတာနဲ့ အလုပ်ဝင်နိုင်ခြင်း
IT Company example; Hitachi, Fujitsu, Fujitsu Advanced Engineering, NHN PlayArt
3. PDCA Learning Method
Plan-Do-Check-Action (PDCA) ဆိုတဲ့ အစဉ်လိုက် သင်ကြားပေးခြင်းကို အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ပထမနှစ်ရဲ့ ဆောင်းဦးလောက်မှာ ဂျပန်အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ (Fundamental Information Technology Engineer), ဒုတိယနှစ်ရဲ့ နွေဦးမှာ အဆင့်မြင့် (Applied Information Technology Engineer) အစရှိတဲ့ လက်မှတ်တွေကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီဘာသာရပ်ကတော့ SE ရဲ့အဆင့်မြင့်ပိုင်း (Expert System Engineer) ကိုရည်ရွယ်တဲ့လူတွေ အတွက်ပါ။ IT Company တွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ SE သမားတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ Intership တွေကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
Lecture တွေကို Database Share No.1 ဖြစ်တဲ့ Oracle Company ရဲ့ သင်ကြားမှုအပိုင်းကို ဂျပန်မှာ ပထမဆုံးရရှိထားပါတယ်။ Oracle Master လက်မှတ်တွေကိုလဲ နှစ်တိုင်းအောင်မြင်တဲ့ကျောင်းသား အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Big Data , Cloud Computing အစရှိတဲ့ နည်းပညာပိုင်းတွေကိုလဲ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
Graduation Thesis မှာတော့ တကယ့်လက်တွေ့ Company တွေရဲ့ System ကို Development လုပ်ရပါမယ်။
Expert System Engineer, Database Engineer, Project Manager
1. အလုပ်ရရှိနိုင်မှု ရာခိုင်နူန်း မြင့်မားခြင်း
အလုပ် Company example; Accenture Technology Solutions, JR East Information System, Yahoo Japan, Hitachi Software Engineering
2. Certificate ၂ခုအထက် ရရှိနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ခြင်း
Database Share No.1 ဖြစ်တဲ့ Oracle ရဲ့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ (Oracle Master Gold), ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ (Database Specialist), (Applied Information Technology Engineer)
3. လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်နေတဲ့ SE တွေ၊ SE အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆရာတွေရဲ့ သေသေချာချာ ကြပ်မတ် သင်ကြားပေးခြင်းအားဖြင့်
အသစ်သစ်သောနည်းပညာတွေကို လေ့လာ ဆည်းပူးနိုင်ပါမယ်။
IT လောကရဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အပိုင်းဖြစ်တဲ့ Network ပိုင်းရဲ့ Security Engineer တယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
Computer ကို ချိတ်ဆက်တဲ့ Unauthorized access အပိုင်းတွေ Hacking ပိုင်းကြီးမားတဲ့ ပြသနာတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ Virus အစရှိတဲ့ Sever အပိုင်းကနေ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ လူသားတွေရဲ့ နေထိုင်မှုဘ၀ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Security Engineer အဖြစ်သင်ကြား ပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါမယ်။
ဒီဘာသာရပ်မှာ Internet တွေ Network ပိုင်းတွေရဲ့ အခြေခံနည်းပညာတွေ Encryption, Electronic authentication အစရှိတဲ့ Security ရဲ့နည်းပညာတွေကို သင်ယူရပါမယ်။
Network Security Engineer, Network Engineer, Server Administrator, Network Administrator
1. Security Engineer တယောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပညာရေး
Cisoco Networking Academy ရဲ့ပညာရေးက အခုထိဆို ၁၆နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ဒီကျောင်းရဲ့ဆရာတွေက တီထွင်ထားတဲ့ ပညာရေးပိုင်းတွေကိုလဲ အသုံးပြုပြီး Network နည်းပညာကို သင်ယူရပါမယ်။
2. လက်တွေ့ခန်းတွေမှာ Cisco Company ရဲ့ Rouder တွေကို အသုံးပြုခြင်း
Security Engineer တယောက်အတွက် အခြေခံ Network နည်းပညာက လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်မှာ Cisco Company ရဲ့ Rouder ၂၀၀ကျော်ကို အသုံးပြုပြီး လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုတွေကို လုပ်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Unauthorized Access အပိုင်း အစရှိတဲ့ Security နည်းပညာတွေကို သင်ယူရပါမယ်။
3. Certificate လက်မှတ်ရယူနိုင်တဲ့ ကျောင်းသားအများအပြားရှိခြင်း
Network နည်းပညာရဲ့ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့ CCNA Routing & Switching, LPI Technician Certification တွေကို ကျောင်းသားအများစုက ရယူနိုင်နေပါတယ်။
ဒီဘာသာရပ်မှာတော့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ရင် အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ Certificate တွေဖြစ်တဲ့ (National qualification) ဆိုတဲ့လက်မှတ်ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Electric Works Execution Manager, Installation Technician, Special Radio Operator အစရှိတဲ့ လက်မှတ်တွေကိုလဲ ရယူနိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာသစ်တခု ဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ်ပိုင်းနဲ့ IT နည်းပညာပိုင်းကို ကိုက်ညှိထားတဲ့ Smart Meter တွေ Smart Grid နည်းပညာတွေနဲ့ ပတ်သတ်တာကိုလဲ သင်ယူရပါမယ်။
Electric Works Specialist, Electrician, Qualified Preson for Energy Management အစရှိသဖြင့်
1. Chief Electrical Engineer, Electric Works Specialist စတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူနိုင်ခြင်း
2. နည်းပညာသစ် တခုဖြစ်တဲ့ Energy နည်းပညာပိုင်းကို သင်ယူနိုင်ခြင်း
ဂျပန်အစိုးရက ထောက်ခံအားပေးထားတဲ့ Home Energy Management System (HEMS) တွေ Smart Meter တွေအစရှိတဲ့ နည်းပညာအသစ်တွေနဲ့ Eco Logy နည်းပညာပိုင်းကိုပါ သင်ယူရပါမယ်။
3. အနာဂတ်ရဲ့ နည်းပညာတခုဖြစ်တဲ့ Smart Energy ပိုင်းကို သင်ယူနိုင်ပါမယ်။
အခုလက်ရှိ နည်းပညာရှင် တယောက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စစ်နည်းပညာပိုင်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး အနာဂတ်ရဲ့ လူနေထိုင်မှု ဘ၀တွေမှာပါ အသုံးချနိုင်တဲ့ Smart Energy နည်းပညာပိုင်းကိုပါ သင်ယူနိုင်ပါမယ်။
မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ နေထိုင်မှုဘ၀ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာရှင် တယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
လေဆိပ်၊ အဆောက်အဦး၊ Amusement ဖြစ်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ အဆောက်အအုံတွေ ရထားသံလမ်း အစရှိတဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆောက်လုပ်မှုတွေရဲ့ Design, Maintenance, Operation, Management ပိုင်းတွေကို လုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် လူတယေက်ဖြစ်လာစေဖို့ သင်ကြားပို့ချပေးပါတယ်။
ဒီ Electrical လောကမှာ ချက်ချင်းအလုပ်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ (အလုပ်လုပ်ခြင်းပဲ မဟုတ်ဘဲ) လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်မယ့် အရာတွေကိုပါ သင်ကြားပို့ချပေးပါတယ်။
Electrical Works Specialist, Building Sanitation Management Technician, Electrician အစရှိသဖြင့်
1. အလုပ်ရရှိနိုင်မှု ၁၀၀% (၂၀၁၄ ခုနှစ် ၃လပိုင်း စစ်တမ်းအရ)
လျှပ်စစ်ပိုင်း (Electrical) လောကက နေ့စဉ်လူနေထိုင်မှုဘ၀အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီအလုပ် လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် လူမလိုဘူးဆိုမျိုးမရှိတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ပါ။ Electrical ပိုင်းလောကရဲ့ နာမည်ကြီး Company တွေမှာ အလုပ်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
2. လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရရှိနိုင်ခြင်း
Ministry of Economy, Trade and Industry ရဲ့အသိအမှတ်ပြုဘာသာရပ်ပါ။ အရမ်းခက်ခဲတဲ့ Certificate (အောင်မြင်တဲ့ ရာခိုင်နူန်း ၁၀% ၀န်းကျင်လောက်ပဲရှိသော) တွေကို ဒီဘာသာရပ်မှာ သင်ယူရင်းနဲ့ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုစရာ မလိုအပ်ပဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် (The Second Class Electric Work Specialist) အစရှိတဲ့ လက်မှတ်တွေကိုလဲ (Bactrical Examination) အောင်မြင်ရုံနဲ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းဆင်းပြီးချိန်မှာ နှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်ပြီးရင် စာမေးပွဲဖြေစရာ မလိုဘဲ လက်မှတ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း
3. Solar Photovoltaics အစရှိတဲ့ နည်းပညာအသစ်ဖြစ်တဲ့ Energy ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကို သင်ယူနိုင်ခြင်း
Solar Photovoltaics, Large-Scale energy storage systems, Electric နဲ့ IT ပိုင်းကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Smart Grid နည်းပညာ အစရှိတာတွေကို သင်ယူရပါမယ်။
လူတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘ၀တွေကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ နောက်ကွယ်ကနေ လိုအပ်တဲ့ Support လုပ်ပေးနိုင်မယ့် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
အိမ် အဆောက်အအုံတွေရဲ့ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ၊ Internet လိုင်းချိတ်ဆက်မှုတွေ အစရှိတာတွေကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့်လူတယောက် ဖြစ်လာစေဖို့ သင်ကြားပေးပါတယ်။ Lecture မှာ အဲ့လို Electrical ပိုင်းအတွေ့အကြုံရင် ဆရာတွေက Pro တွေ အသုံးပြုနေသလိုမျိုး စက်ပစ်စည်းတွေကို အသုံးချပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ဒီဘာသာရပ်မှာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရယူဖို့ပဲ မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းပြီးချိန်မှာ Electrical ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ကို ၀င်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ကျောင်းဆင်းကျောင်းသာတွေက Tokyo Desneyland, Roppongi Hills, Tokyo Skytrees အစရှိတဲ့ နာမည်ကြီး အဆောက်အဦးနေရာတွေရဲ့ Electrical ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
Electrical Works Specialist, Electric Works Execution Management Engineer
1. နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း အလုပ်ရရှိနိုင်မှု ရာခိုင်နူန်း ၁၀၀% ရှိခြင်း
စီးပွားရေး ကျဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာလဲ အလုပ်ရလွယ်ကူပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် အများစုက ဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆင်းကျောင်းသားတွေကို လိုချင်တဲ့ အတွက် နှစ်တိုင်း ၁၀၀% အလုပ်ရနေပါတယ်။ အခုအချိန်ထိဆိုရင် ကျောင်းဆင်းကျောင်းသား ၃၀၀၀ကျော်က Electrical နယ်ပယ်မှာ အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
2. Second Kind Electricity Construction Person ဆိုတဲ့လက်မှတ်ကို လူတိုင်းရယူနိုင်ခြင်း
ဒုတိယနှစ်ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဒီအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေကို လူတိုင်ရယူနိုင်ပါမယ်။ First Kind စာမေးပွဲအတွက်လဲ ပြင်ဆင်မှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
3. ကိုယ်ဝါသနာပါ သင်ယူချင်တဲ့ ဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း
ပထမနှစ်မှာ Electrical Worker တယောက်အတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင်ယူမှုတွေပြုလုပ်ပေးပြီး ဒုတိယနှစ်မှာတော့ Solar Photovoltaics System နဲ့ Network Construction ပိုင်းကို ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အပိုင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Electric car, Medical Equipment, Bipedal Walking Robot, Artifical Satellite, Car Navigation, Mobile Phone အစရှိတာတွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ FPGA နဲ့ Microcomputer Technology ပိုင်းတွေကို သင်ယူရပါမယ်။ သင်ယူခြင်းရဲ့ လက်တွေ့ခန်းတွေမှာ တကယ့်လက်တွေ အသုံးပြုနေသလိုမျိုး တီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ Original သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး လုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူလဲ အခြေခံပိုင်းကနေ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့်ပိုင်း Thesis မှာတော့ ကိုယ် desire ရှိတဲ့ အလုပ်ဝင်ရောက်ချင်တဲ့ အပိုင်းနဲ့လိုက်ပြီး သီးခြားသင်ကြားပေးခြင်းလဲရှိပါတယ်။
Electrical Design Engineer, Medical Equipment Engineer, Audio Equipment Engineer, Coustomer Engineer, Game Equipment Engineer, Customer Engineer
1. ကျောင်းသားတယောက်အတွက် အလုပ်နေရာ ၂၀၀ကျော်ရှိနေတဲ့အတွက် အလုပ်ရလွယ်ကူခြင်း၊
ဒီနယ်ပယ်ကနေ ယုံကြည်မှုရရှိခြင်း၊ ယောက်ျား မိန်းမ မခွဲခြားပဲ အလုပ်နေရာအများအပြားကနေ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အလုပ်နေရာရှာဖွေနိုင်ခြင်း
2. သင်ကြားခြင်းနဲ့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကိုက်ညှိထားတဲ့အတွက် နားလည်ရလွယ်ကူစေခြင်း
Lecture ပိုင်းမှာသင်ထားတာတွေကို ချက်ချင်း Pratical လက်တွေ့လုပ်ရတာဖြစ်လို့ အဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲ နားလည်သဘောပေါက်စေနိုင်ပါတယ်။
3. အလုပ်ဝင်ချင်တဲ့ အလုပ်ပိုင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ သီးသန့် Lecture တွေလဲရှိခြင်း
ဒုတိယနှစ်မှာ ကိုယ်ပိုင် desire နဲ့ကိုက်ညှိပြီး သီးသန့် Lecture ထည့်သွင်းပေးထားခြင်းလဲ ရှိပါတယ်။
〒169-8522　1-25-4 hyakuninn chou Shinnjuku ku Tokyo.　TEL: 0120-00-9691